Archive du 20170513
Onitiana Realy Miara-miasa amin�ny TIM
Olona 1 250 avy amin�ny fokontany 17 ao anatin�ny kaominina ambanivohitr�i Sabotsy Namehana no mahazo tombontsoa mivantana amin�ny alalan�ny hetsika tanamaro fanadiovana lakandrano mirefy 1,2 km.
Me Olala �Tsy misy il�na azy ny mpitondra eto�
Vavolombelon�ny tolon�ny 13 mey 1972, izay feno 45 taona katroka anio ny mpisolovava Willy Razafinjatovo na �Olala�.
Fahatsiarovana ny 13 mey Tsy hisy kabary, hoy ny jeneraly Florens
Nandray fitenenana farany tamin�ny maha lehiben�ny CIRGN Analamanga azy tetsy Ankadilalana omaly ny jeneraly Florens Rakotomahanina.
Jean Omer Beriziky �Tokony hosamborina ny senatera Riana�
Tsy misy intsony ny fitokisan�ny vahoaka ny fitsarana, ny mpitandro filaminana, ny fitondrana amin�ny ankapobeny noho ny resaka kolikoly ka manjary lasa manao ireny fomba tsy mety toy ny fitsaram-bahoaka ireny ny olona.
Fitondrana Rajaonarimampianina Misy mbola tokony hoesorina, hoy ny VTSR
Lasa tsy marin-toerana noho ny fisian�ny kolikoly, ny tsy fandriampahalemana, fitsaram-bahoaka ary ny fisondrotan�ny vidim-piainana samihafa ny fitondrana ankehitriny,
Miarahaba ry Jean a ! Hita mihitsy fa tena mahay sarimihetsika ianareo e ! Rehefa misy resaka mafampana eto amin�ny tan�na dia mody mandaka akama ianareo dia mba manadio ny manodidina.
Lova tarazo, tsy mba mihatsara fa miha simba sy manimba ny raharaham-pirenena ankehitriny.
Mpanao gazety Andry Ratovo 360 tapitrisa Ar no ilaina amin�ny fitsaboana azy
Efa am-bolana izao no nidiran�ny mpanao gazety namana Andry Ratovo tany amin�ny hopitaly. Tsy arak�ireo vady aman-janany sy ny fianakaviany intsony ny fitsaboana azy.
Amboditevana Ambodivona Hahazo rano fisotro madio ny fokonolona
Nody ventiny ara-bakiteny ny rano nantsakaina ho an�ny fokonolona Amboditevana ao amin�ny fokontany Ambodivona.
Fanadinana EPS bakalorea Alaina eny amin�ny �centre� ny �convocation ho an�ny sokajy A2
Hanomboka ny sabotsy 27 mey ho avy izao ny adina ara-panatanjahantena Bakalorea ho an�ny DREN Analamanga ka ny taranja lomano no hisantarana azy.
Tarika Ny avo Hitondra an-tsehatra ny halehiben�ny finoany
Sambany hanao kaonseritra fampahafantarana rakikira ny tarika Ny avo taorian�ny rakikira roa efa navoakany.
Halatra moto teny Itaosy Tratra izy telolahy mpiray petsapetsa
Voasambotry ny polisy miasa ao amin�ny kaomisaria Itaosy ny alarobia teo, teny Amberivatry Bemasoandro Itaosy ny mpangalatra moto telolahy. Raha tsiahivina, nisy olona vaky trano teny amin�iny faritra iny ny alin�ny 23 martsa lasa teo.